Muna 2021 iyo Apple Watch yakaramba ichirova vese vaikwikwidza | Nhau dze iPhone
Zvinoita sekuti nhamba dzekutengesa dzeApple smart wachi hadziregedze kana kuronga kuzviita, kunyanya kana tikateerera data yakaratidzwa neCounterpoint Research, nezvekutengesa kweiyi smart wachi kubva kukambani yeCupertino gore rapfuura 2021.
Ehe, isu takapedza makore akati wandei umo Apple Watch inotonga ine solvency mumusika wewachi smart, saka hazvishamise kuti gore rapfuura 2021 rakakwanisa. kuwana inopfuura hafu yemari yose yemusika ye smartwatches.
Gore negore Apple Watch ichiri kutonga
Zvinoita sekuti kambani yeCupertino yakarova chipikiri mumusoro newachi iyi kubvira, kunyangwe yaitanga mumakore mashoma apfuura, yakakurumidza kuwana huwandu hukuru hwekutengesa uye nhasi tinogona kutaura izvozvo. Ndiyo wachi inodiwa uye inotengeswa zvakanyanya mumusika wewachi wakangwara. Zviripachena panotengeswa mimwe michina iri muUnited States, asi inoteverwa zvakanyanya neEurope, China nedzimwe nyika. Ichokwadi kuti muna 2020 iyo Cupertino wachi yakamira kuwana rekodhi rekodhi data nekuda kwezvikonzero zviri pachena senge denda repasi rose, kunyangwe chiri chokwadi kuti rakatangazve muna 2021.
Chete mukati mechikamu chechina zvinopfuura mamiriyoni makumi mana emayuniti akatumirwa, ivo pasina mubvunzo vaive nguva yekutengesa yakanakisa munhoroondo yewachi pachayo. Sujeong Lim, mumwe wevakuru veCounterpoint Research, akapa data panhau idzi:
Kukura kwakanaka kwemusika wepasi rose smart wachi muna 2021 kwakakosha pachayo, asi kwakanyanya kukosha nekuti kunoita kuti titarisire kukura mune ramangwana. Nekugona kwavo kutarisa akakosha ehutano paramita senge blood pressure, ECG, uye SPO2, zvishandiso izvi zviri kuita mukurumbira. Zvakare, kukwezva kwemawachi e smartwachi sezvishandiso zvinopfeka zvakazvimirira zvichawedzera kana akawanda acho akatanga kutsigira cellular yekubatanidza.
Ehe, iwo haasi manhamba akaderera kunyangwe ichokwadi chekuti Apple Watch yanga ichienderera mukugadzira kwayo uye mabasa mumakore achangopfuura. Vazhinji vakamirira kusvika kweApple Watch inokwanisa kuyera glucose yeropa, asi izvi hazvisati zvasvika. Pasinei nezvose izvi iyo Apple wachi ichiri kutengesa zvakanyanya uye inoramba ichiwana rekodhi nhamba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Muna 2021 Apple Watch yakaramba ichirova vese vaikwikwidza